တင်ဒါကြေငြာချက် - Ankaray လုပ်ငန်းရထားကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်း ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း | RayHaber | raillynews
« တင်ဒါကြေငြာချက် - ကွန်ကရစ်အိပ်စက်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုရန်ဘိလပ်မြေကိုဝယ်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır »
Ankaray စက်ရုံရထားကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း
အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ အရ Ankaray လုပ်ငန်းအတွက်ရထားကြိတ်ခွဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုတင်ဒါတင်ဒါခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
က) အမည် - ရတနာကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းရထားတွဲလုပ်ငန်း
ပစ္စည်း (၄) ခု၊ Ankaray စက်ရုံရထားကြိတ်ခွဲခြင်း ၀ ယ်ယူရေးလုပ်ငန်း
(ဂ) လုပ်မည့် / ပို့မည့်နေရာ - Ankaray Enterprise Maintenance Centre Nergiz Sokak No:2Söğütözü / ANKARA
ç) အလုပ်စတင် / ရက်စွဲ - အလုပ်စတင်သည့်နေ့မှရက်ပေါင်း (၉၀) ရက်
ဃ) အလုပ်နေ့စွဲ စတင်. : 10 စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. ရက်အတွင်းအလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 09.04.2020 - 15: 00
ခ) တင်ဒါကော်မရှင် (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်) ၏အစည်းအဝေး၏နေရာအရပ်: ရဲတပ်ဖွဲ့ခရိုင် Hippodrome Caddesi အဘယ်သူမျှမ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု:5Block ။ ကြမ်းပြင်:4အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီခန်းမ Yenimahalle / တူရကီ
တင်ဒါအသိပေးချက် - ဓာတ်လှေကားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည် (Ankara Metro Operation Red Crescent ızı
တင်ဒါအသိပေးချက် - ဓာတ်လှေကားကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည် (Ankara Metro Operation Kızılay Station နှင့်…
တင်ဒါအသိပေးချက် - စက်အမျိုးမျိုးကိုရရှိလိမ့်မည်။
TCDD ရထားလမ်းပရိုဖိုင်းကြိတ်ခွဲခြင်း, ultrasonic စစ်ဆေးရေးနှင့်အလိုအလျောက်ရထားလမ်းအမှတ်အသားစက် ...
တင်ဒါအသိပေးချက် - အကာအကွယ်ရထားလမ်းကြိတ်ခွဲစက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားစနစ်က Surface အတွက်ချွတ်ယွင်းအတွက်စီးပွားရေး Making ကြိတ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အများ၏ကုန်စည် Ankaray B ကစီးပွားရေးဂျာနယ်ကစီးပွားရေး၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
တင်ဒါကြေငြာချက်: ANKARAY ဌာနİGBT Module İGBT Module DBU PCB ထိန်းချုပ်မှု…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စီးပွားရေး Ankaray မီးရထားပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘသည်များအတွက်ကျောက်မီးသွေးအင်ဂျင်